၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း - ဗီဒီယိုချက်တင် - အချစ်အွန်လိုင်း!
ဗီဒီယိုချက်တင် Smolensk။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ။
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေနှင့်ပင်အချို့၊သူတို့ရဲ့တှေ့အခြား။။။။။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူမေတွန့်ဆုတ်သောအခါရတဲ့အကျွမ်းနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာ၊ဒါကြောင့်အလိုလူတွေ၊ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတက်လာထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး...
ကျွန်မအတွက်ရေရှည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးဖန်တီးရန်တစ်ဦးအားကြီးသောအမေရိကန်သားစုမ်ား၊လေပိုကောင်းလေဘဲစွဲလမ်း။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ့နာမကို-အန်၊ငါသည်ဖြစ်ကြောင်းကို ၁၈ အသက်အနှစ်၊ငါအဘို့အရှာနေပါ၏အချစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊ပိုက်ဆံ၊အကြီးဇိမ်ခံနှင့်စမတ်အမျိုးသားများအတွက်၊အကြောင်းနည်းနည်း:အမြင့် ၁၅၆၊မှောင်မိုက်တဲ့အစိမ်းရောင်မျက်စိ။ အားကစားအောင်မြင်မှုလူ ၃၀ အသက်အနှစ်၊ရှေ့နေ၊အဘို့အကုမ္ပဏီများ၊အစည်းအဝေး၊။ ရေးငါသည်သင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်။ တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှု၊အဖိုးတန်မိန်းမကိုမြို့နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူလူ ၅၀-၅၈ နှစ်အရွယ်တစ်...
ဤသည်လက်ရှိတွင်အများဆုံးရေပန်းစားရုရှားကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ ဆိုရန်တီထွင်၊အဆိုဒ္လိပ္စာကသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်နေ့စဉ် ၂၀၀ ခန့်။ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏။ ပင်နာမည်ကြီးတွေအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သင်၌:ငယ္လည္း၊တို့ Mikkus၊gusary နှင့်ျဖင့္အခြားဘလော့ဂါများသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်သာအကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ ကလူအများစုဟာသာအရာ၊ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းပိုလန်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေ။ ကစားတဲ့၊ကတားမြစ်ထားသည်အဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်လိမ့်မည်၊masturbate သို့မဟုတ်စော်ကားအခြားလူများအတွက်၊ဒီလိုမှ...
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေနှင့်ပင်အချို့၊သူတို့ရဲ့တှေ့အခြား။။။။။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူမေရမှတွန့်ဆုတ်ကျွမ်းနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာ၊ဒါကြောင့်အဘို့အထိုကဲ့သို့သောလူပြီထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချက်တင်ကစားတဲ့-ဒါဟာ...
၏အားသာချက်ဒီဗီဒီယိုချက်တင်အားဖြင့်ခေါ်ကြောင်းအွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ မပါဘဲ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင် အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းဖွင့်ဖို့ချင်သူအမျိုးသမီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးကောင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်အသိမိတ်ဆွေအားဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ ဒါကြောင့်ဖွင့်ဖို့သဘောတူထားချက်တင်ကစားတဲ့အချိန်မှာ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အများကြီးရှိပါတယ်အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများ။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကသူတို့အားလုံးပါဝင်။ သင်ခွင့်ပြုနေကြတယ်အဖြစ်ဒီဗီဒီယိုမှာပင်သင့်အောက်၌ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၈။ ဒါကြောင့်တက်အ...
သူငယ္ခ်င္းသစ္ရွာေဖြျခင္းKemerovo ဒသသို့မဟုတ်ရှာဖွေသင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ။ ဆိုင်းအပ်-ကကုန်ကျပါဘူးဘာမှမနှင့်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင့်။ အချိန်ကိုရောက်စေဖို့ဆိုက်ဆောင်တစ်ခုတည်းသောအပြုသဘောရလဒ်တွေ။ ကံကောင်းပါစေရှာဖွေအခြား။။။။။ ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူ၊အရာအားလုံးကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောအရာအားလုံးထွက်လှည့်ပါလိမ့်မယ်မပါဘဲသူ့ဟာသူအားဖြင့် tantrums နှင့်ဦးနှောက်ဖယ်ရှားရေး။ ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ။ အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်မှယောက်ျား ၃၅ မှ ၅၀ အသက်အနှစ်။...
မြို့ပေါ်တယ်"မြို့၏Semipalatinsk"၊နေထိုင်သူများအတွက်မှတ်ပုံတင်မြို့ပရိုဖိုင်"ချိန်းတွေ့"။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် Gashidrat Semipalatinsk၊ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်သင့်လျှောက်လွှာနှင့်အတူဆွေမျိုးသားချင်းများလုပ်ချင်သူငယ္ခ်င္းလိုဖြစ်ကျော် ၁၈ အသက်အနှစ်။" သာအဲလစ်မဆီးတားနိုင်။ ကိုယ့်အဖြစ်တောက်ပစွာနှင့်ချစ်စရာကောင်းဖြစ်ဟိုတယ်:"မော်ထူးပြောစရာမရှိအပေါ်ပရိုဖိုင်၏Ailsa အသံုးျပဳသူမ်ား၏"Oliga။ တစ္ေန့။ ဒါဟာတူလှပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းတစ်ဦးဗျာ။ တိုတိုနှင့်နက်ရှိုင်းသော။ ငါလိုအားလုံး။။။။။ "မော်"ပေါ်...
ပူးပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှင့်အသင်ခံရလိမ့်မည်အကြောင်းကြားအပေါင်းတို့သည်သတင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှု။ ငါပြောဖို့အမျှလိင်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအူချဉ်းကပ်ဖို့သင်ကြိုက်အစိမ်း။ အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအားဖြင့်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုသင်ကူညီလိမ့်မည်ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်း။ အောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ။ အဓိကအကြောင်းအရာအန္ေဆာင္မႈသည္အသီးအသီးအသုံးပြုသူအမြင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုျဖင့္အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်တိုတောင...
ဗီဒီယိုစကားပြော Volgograd။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ။
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေနှင့်ပင်အချို့၊သူတို့ရဲ့တှေ့အခြား။။။။။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူတွန့်ဆုတ်သောအခါရတဲ့အကျွမ်းနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာအဘို့ဤမျှထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးအတူတက်ကြပြီထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောလမ်းဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး၏ချက်တင်...
အတော်များများစာဖတ်သူတွေမေးလျှင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဖတ်ရန်တရုတ်အွန်လိုင်းဆိုရင်သင်ကအဝေးကနေတရုတ်နိုင်ငံ။ တဦးတည်း၏အတားအဆီးဖြစ်မည်အကြောင်းကဗျာ၊ဒါပေမယ့်ပင်ဤဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါသည်နှင့်အတူအကူအညီ၏။ ဒီ့ပြောခဲ့တဲ့၊ဒါပေမယ့်ငါ့အဖို့အံ့၊ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးတယ်ကျွမ်းနှင့်အတူမိုးေပျဉ်ပြားဖြစ်ပါတယ်၊သောမျှမျှတတရိုးရှင်းပြီးအပေါ်ပရိုဖိုင်ကိုဒီလူမှုကွန်ယက်။ ဘာမှမရှိဘူးခဲ့သည်အတူဘုံ၌ရုရှားနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ လည်း၊တရုတ်မိန်းကလေးများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အရာအလိုက်အုပ်စုအကြောင်း။ သင်ရှာဖွေလိုလျှင်၊ရှိလ...
ဂ်ချက်တင်ကစားတဲ့-တိုကျို ချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့မ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အလှဆုံးမိန်းကလေးများနှင့်ထိုကဲ့သို့သော blah blah Blah။ သင်လိုအပ်ချက်ချင်းဒီအရေပြား။ ရဲ့တဦးတည်းအရာ။ ဒုတိယအ၊အလှည့်ဖြားစိုးရိမ်ပူပန်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်။ အားလုံးရေးထားတဲ့အတွက်ဂျပန်၊ဒါပေမယ့်အတွက်ရုရှားအပိုင်း။ ကောင်းစွာ၊သင်ပြီးသားနေတဲ့ဂ်စီမံကိန္း၊ဒါပေမယ့်သင်ပစ်မှတ်ထားနေသောကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်၊ထိုအခါတစ်ဦးရုရှားမွတ္ထား၊ဤသည်ယုတ္တိ။ သူအကြားပြည်တွင်းနိုင်ငံသားများသိဂ်ပန္? အနည်းဆုံး၊ဒါပေမယ့်မဖြစ...
အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကမ္ဘာတဝှမ်းအများအတူတကွယှဉ်၏လူအတော်များများမှကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းကမ္ဘာကြီးသူကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်င်းတို့၏မေတ္တာမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆို၊မျှဝေသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်၊အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူနှင့်အများကြီးပို။ ဝါသနာအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံထိုဝိညာဉ်အဘို့အ၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုယူအချိုးကနေနေ့စဉ်အသက်တာနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတူသင်၏အသက်တာဖြည့်စွက်တယောက်အနက်အဓိပ္ပာယ်။ ဤကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တာ-သဘောပေါက်၊သောသ...
အစည်းအဝေးယောက်ျားကနေ Rogachiksky သို့မဟုတ်
အပေါ်အစက်အပြောက်ကနေ Rogachik ခရိုင်နှင့် Kherson ၇၅ အမ်ိဳးချင်မှအဖွင့်ဖို့တစ်မိသားစု။ငါ့ကဗျာမရှိခြင်းအတွက်အကောင်းလှ၏။မရှိနိုင်တာတောင်ဘာမှလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်ကြောင်းကိုအလျော်အလျော်လူ၊ငါကြောင်းသိတော်မူသည်။ တစ်ချောမော၊ကောင်းစွာဆောင်ဖို့။ အဘယ်သူမျှမအကူ။ အမြင့် ၁၇၈ အလေးချိန် ၈၀ ကီလိုငါချစ်ခြင်းမေတ္တာအားကစား။ ငါသည်အသက်ရှင်သောအဘယ်မှာရှိ။ လံုးခ်င္းအိမ္အပေါ်ကျွန်းဆွယ်ပင်လယ်၌ယူကရိန်း၏။ ငါအစေခံဖွင့်လှစ်ရန်ငါ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုနေအိမ်၊ပျမ်းမျှအားတပ်ဆင်ရန်အပူ။ ငါ့နာမကိုသံုးႏိုင္သူမ်ား၊...
Yoshkar-Ola ဗီဒီယိုချက်တင်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ။
အင်တာနက်ကိုအရှည်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အချိန်တွင်နိုင်မကြည့်သူတို့၏အသက်တာမပါဘဲ။ ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာအများ:ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့၊အမိန့်အစားအစာ၊အဝတ္အထည္မ်ား၊ရွေးချယ်တဲ့ကား၊အိမ်ခြံမြေနှင့်ပင်အချို့၊သူတို့ရဲ့တှေ့အခြား။။။။။ လူသားသည်လူမှုဖြစ်ခြင်း၊ဒါကြောင့်သူအသက်မရှင်နိုင်ပါပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူမေတွန့်ဆုတ်သောအခါရတဲ့အကျွမ်းနှင့်အတူနေ့စဉ်အသက်တာအဘို့ဤမျှထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးအတူတက်ကြပြီထိုကဲ့သို့သောတစ်မူထူးခြားသောဒီဇိုင်း။ ဆက်သွယ်တဲ့လမ်း...
အလိုဆန္ဒများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလူ့လိုအပ်ချက်၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်၏ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီသိသာထင်ရှားသောအလှူသည်ဤအဧရိယာ။ ရုရှားကစားတဲ့၊တစ်ဦးအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းစသည်၏နာမည်ကျော်အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းသည်အသွင်သည်တစ်ဦးတစ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်ရှာတွေ့မှတစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ရေရှည်ဆက်သွယ်ရေး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေအလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှုကိုသာအထွေထွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့စက်ဝိုင်းနှင့်၊ဒါပေမယ့်လည်းရှာတွေ့ဖို့အတွက်တ...
အိန္ဒိယ၏မွေးယောဂ၊palmistry၊စစ်တုရင်၊နှင့်အမှန်တကယ်ရော။ တိုင်းပြည်အတွက်၊ကလေးတိုင်းလူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ်အဖြစ်မျိုးနှင့်ချစ်ခင်။ သင့်မိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ်ဦးကအိန္ဒိယ၊သူတို့ကျိန်းသေလာဖို့သင့်အကူအညီအတွက်ခက်ခဲကြိမ်။ သင်၏အိပ်မက်မက်ရှာတွေ့အထောက်အပံ့။ တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်စာန်သင်ရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်မိတ်ဆွေများအတွက်အိန္ဒိယ၊မှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာကြာအနည်းငယ်သာအချိန်နဲ့မလိုအပ်ပါဘူးငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်။ မှတ်ပုံတင်ပေးသည်သင်အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ဖို့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ၊သငျသညျကိ...
ဗီဒီယိုချက်တင် Poznań။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ။
အခါသင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကိုယ့်လမ်းပေါ်ဆင်းလမ်းလျှောက်အ၊ျစိမ်း၊ရပ်တန့်၊ပြုံးမှာသူမ၏နှင့်ဟိုင်းနသည္။ သင်သည်ငါ့ကိုပြောပြပါ။" သူမမကြိုက်ဘူးကြောင်း။ နှင့်ငါတို့နေရာ၊လူတိုင်းပါဘူး။ ထောင်အများအပြားအဆင်းလှသော၊စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပေါင်းကောင်းသောမိန်းကလေးများကိုလာပြီးနေ့တိုင်း။ ပဲ၊သာမန်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒါဟာဖို့အချိန်င့်ပြန်လည်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပြောတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မင်္ဂလာပါ။ သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါမိန်းကလေးများကင်မရာကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်:ရုရှားက၊အမေရိက၊ကနေဒါ၊ဥရောပ၊သ...
ပူပြင်းတဲ့အနက်ရောင်ဆံရှင်နှင့်အတူအနက်ရောင်မျက်စိသည်မတိုင်းယောက်ျား၏အိပ်မက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်၏နှလုံးအနိုင်ရထိုကဲ့သို့သောဂုဏ်အသရေ၊သင်ပြပွဲတွေအများကြီးများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သည်းခံခြင်း။ သို့သော်၊ရလဒ်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်။ ညဦးတိုင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသာအပူညစာ၊ဒါပေမယ့်လည်းအဘယ်သူမျှမလျော့နည်းအသည်းအသန်နမ်း။ ကောင်းစွာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အနိုင်ရမှအဆင်းလှသောမိန်းမ။ ထိုအခါမှတ်ပုံတင်အတွက်အခုအချိန်မှာ။ အသီးအသီးအသုံးပြုသူ၏ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ကိုယ်ရေးစာမျက်နှာအမြင်နှင့်မှတ်ချ...
ကမ္ဘာ၏မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်၏အပြည့်အဝအမျိုးမျိုးသောနေရာများ၊သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်စေလွန်းစျေးကြီးသို့မဟုတ်ယူတက်လူမျိုး၏အများဆုံးအချိန်ရဲ့။ ထို့ကြောင့်၊အင်တာနက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အဆက်မပြတ်တိုးချဲ့၎င်း၏အခွင့်အလမ်းများကိုအပျော်အပါးမှလူအချက်ဖွဲ့စည်း။ ဒါကြောင့်စျေးသက်သာပြီးလွယ်ကူအွန်လိုင်း။ ကိုယ့်အဖြစ်သင်ဝယ်နိုင်ရထားလက်မှတ်အနည်းငယ်မျှနှိပ်ရုံအတွက်၊ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာအများအတွက်၊အနည်းငယ်မျှနှိပ်မုအရင်းနှီးပျော်နှင့်အလှအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့။ အားလုံးဒီအမြင်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန...
ဗီဒီယိုချက်တင် Petropavlovsk Kamchatka။
ကတည်းကလာဤစာမျက်နှာကို၊သင်ဖြစ်ကောင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဒီဖ်ာ္ေျ။ ကစားတဲ့စကားပြောတာထက်ပိုအချည်းတစ်ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အဘယ်မှာသင်ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနိုင်ပြီးပြည့်စုံသောဧည့်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ဆိုးရွားသောအဖြစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို။ ဒီဗီဒီယိုချက်တင်န်ဆောင်မှုအခိုကင်း၏ချက်တင်။ ဒါပေမယ့်သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်ညာဘက်မိတ်ဖက်၊သင်ရိုးရှင်းစွာအကိုနှိပ်ပါခလုတ်တစ်ခုနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အခြားသူ။ သင်ကြိုက်လျှင်သင်အသစ်မိတ်ဖက်၊ ကိုယ့်နှုတ်ဆက်ပြီးစတင်က်ပ္။ ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးသင်ကြည့်ရှုလိုသောလူတစ်ဦ...
ဒါငါရွာေချက်တင်။ ရှိပါတယ်ရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမကောင်းသောသူမြား။ တစ်ခုခုလွန်းအနည်းငယ်လူ၊သို့မဟုတ်ကျောင်းသားများသူတို့ကိုယ်သူတို့။ ငါသည်အအ။ ဒါဟာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှစ်ခုနေ့ရက်ကာလအဘို့။ နှင့်မပါဘဲ။ ငါတွေ့သောမိန်းကလေးများငျးသုတ်နှင့်အထိုင်အတွက်သူတို့ရဲ့ဘီမ်ား။ ပထမတော့ကျွန်မအထင်ဒါဟာတစ်ရုပ်ရှင်၊ပြီးတော့သူကဟုတ္ရသူတို့ကိုအနည်းငယ်မေးခွန်းတွေနဲ့သူတို့ငါ့ကိုပြန်ဖြေ၏။ ငါ၌ရှိ၏။ တိုတိုပြောရရင်၊ယောက်ျားတွေလိုသူချက်တင်နှင့်အတူ၊ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်များမှာထည့်သွင်းအသစ်အင်္ဂါအဓိကမွတ္ထား။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊အဟောင်...
သူ ၂၄ အသက်အနှစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးများကမေးသည်ရှိသော်မမျှဝေဖို့သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်နှင့်အတူလူတို့အသက် ၂၄ ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့၏အပြုအမူ။ အများအပြားသည်ဤအမျိုးသမီးများအတွက်အပူတပြင်းအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်သဘောတူစောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့အထောက်အလျှို့ဝှက်ချက်? အခုဖြည့်စွက်အားဖြင့်ထွက်အတိုပုံစံ၊သင်စာရင်းတခုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်ဓာတ်ပုံများ၏အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များတပ်ထီးအာရုံစိုက်။ နောက်တဖန်အ၊မည်သူမဆိုမပြောကြဘူးကြောင်း။ အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ၂၄ နှစ်နှင့်အဟောင်းတွေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးမျာ...
Адӟиськон араб Воргоронэн
မိန်းကလေးများအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန် အရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယို ဗီဒီယိုကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာ ချက်တင်ကစားတဲ့ကနေအွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုစကားပြောဆှ ဗီဒီယိုချက်တင်စုံတွဲများ ရကျွမ်းအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ ကျွမ်းနှင့်အတူဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်